အားလုံးအကျုံးဝင် မြန်မာပြည် ၂၀၂၀၊ ဒီဇင်ဘာလ။ | Asia Research News
To read this newsletter in English, please click here.
Pour lire ce bulletin en français, veuillez cliquer ici.
မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီအတွက် အသိပညာ (K4DM) ၏ ၂၀၂၀ အထူးဖော်ပြချက်များ
၂၀၂၀ခုနစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီအသွင် ကူးပြောင်းမှုအတွက် အရေးပါသောနှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်ပါသည်။ နိုဝင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့တွင် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းတွင် ဒီမိုကရေစီအာဏာ အပြည့်အ၀ပြောင်းလဲခြင်းကို ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် မှတ်ကျောက်တင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း COVID-19 ကပ်ရောဂါနှင့် စီးပွားရေးကျဆင်းမှုများကလည်း တိုင်းပြည်အတွက် ကြိုတင်မှန်းဆ၍မရသော စိန်ခေါ်မှုများအဖြစ် မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ဤအရေးကြီးသည့် ကာလအတွင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု သုတေသနစင်တာ (IDRC) နှင့် ကနေဒါရှိ Global Affairs အဖွဲ့အစည်းတို့သည် “ဒီမိုကရေစီအတွက် အသိပညာ မြန်မာပြည်” (K4DM) အစီအစဥ်အားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ တတ်သိပညာရှင်များ၊ တက္ကသိုလ်များနှင့် သုတေသီများအတွက် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ယခုထုတ်ဝေလိုက်သော အားလုံးအကြုံးဝင်မြန်မာပြည် သတင်းလွှာကို ဘာသာစကား နှစ်မျိုးဖြင့် အထူးထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ဒီမိုကရေစီအတွက် အသိပညာ မြန်မာပြည် (K4DM) အစီအစဉ်ဖြင့် မြန်မာပညာရှင်များက ပြုစုခဲ့သော ဆောင်းပါးများ၊ အစီရင်ခံစာများ၊ အကျဥ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များနှင့် တင်ပြချက်များကို စုစည်းဖော်ပြထားပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏အနာဂတ်အတွက် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်း၊ အားလုံးပါဝင်နိုင်ခြင်းနှင့် အဆင့်မြင့်ပညာရေးတို့ ကဲ့သို့သော အဓိကကျသည့် မူဝါဒကဏ္ဌများအတွက် အထောက်အထားများနှင့် အချက်အလက်များပေးနိုင်မှုသည် စတင်ဖြစ်ထွန်းစ ဒီမိုကရေစီပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများကို အထောက်အကူပြုနိုင်ပါသည်။
နိုဝင်ဘာလ (၈)ရက်နေ့ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံ ရာထူးများတွင် အမျိုးသမီးများ၏ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ပိုမိုမြင့်တက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ ပညာအလင်းပွင့် မြန်မာ့သုတေသန ဖောင်ဒေးရှင်း (EMReF)သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိအမျိုးသမီးများ၏ နိုင်ငံရေးတွင် ပါ၀င်မှုအတွက် အထောက် အကူပြုမှုများနှင့် အဟန့်အတားများကို လေ့လာခဲ့သည်။
Global Development Network (GDN)နှင့် Centre for Economic and Social Development (CESD) တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူမှုရေးသိပ္ပံ သုတေသန မြင်ကွင်းကို လေ့လာတင်ပြထားပါသည်။
ဓာတ်ပုံများကပြောသော “ကျား၊မရေးရာ တန်းတူညီမျှမှု ဖြစ်ရပ်မှန်များ”
လျှပ်တစ်ပျက်မြင်ကွင်း “ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါနှင့် မြန်မာပြည်”
British Columbia တက္ကသိုလ်မှ Kai Ostwald နှင့် U Tun Myint တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကပ်ရောဂါအပေါ် တုန့်ပြန်လုပ်ဆောင်မှုများ၊ စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဥပဒေနှင့် မူဝါဒ အခြေအနေများအား ဖော်ပြလေ့ရှိသော အေက်စ်ဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်မှ ထုတ်ဝေသည့် COVID-19 နှင့် အာရှ စာအုပ်တွင်ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
Jae Park နှင့် Alexandre Pelletier တို့က လက်ဖက်ရည်ဝိုင်း (Tea Circle) တွင် "အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများအပေါ်စစ်ပွဲများ၏ ကွဲပြားခြားနားသော သက်ရောက်မှုများကို အလေးထား၍ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ရှေ့သို့ချီရန်နှင့် စစ်ပွဲ၏ရေရှည် အကျိုးဆက်များကို ဖြေရှင်းရန် မူဝါဒများရေးဆွဲရမည်ဖြစ်သည်။" ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လုံခြုံရေးအင်စတီကျု (MIPS) နှင့် ပူးပေါင်း၍ သုတေသနပြုခြင်းမှ အဓိက ရှာ‌ဖွေတွေ့ရှိချက်များကို ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများအပေါ် ပဋိပက္ခ၏ သက်ရောက်မှုများကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျား၊ မ ရေးရာ၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် တိုင်းရင်းသား ပဋိပက္ခဟူသော ဆောင်းပါး၌ ဝေမျှခဲ့သည်။
တတ်သိပညာရှင် (Think Tanks) များ၏ အရေးပါမှု အကြောင်းရင်းများ
"ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှ တတ်သိပညာရှင် (Think Tanks) အဖွဲ့များကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည် ကမ္ဘာ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးစနစ်များကို ပြုစုပျိုးထောင်ရန်အတွက် ၎င်းတို့ပြုလုပ်နိုင်သည့် အကောင်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တစ်ခု ဖြစ်နိုင်ကြောင်း အလှူရှင်များက သတိပြုသင့်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အထက်ပါအချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော အခြေအနေတွင်ရှိနေပါသည်။"
-- Edgard Rodriguez
အသေးစိတ်ဖတ်ရှုရန် “မြန်မာ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် တတ်သိပညာရှင် Think Tank များ၏အဓိက အခန်းကဏ္ဍ”ကို လက်ဖက်ရေဝိုင်း (Tea Circle) တွင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံသားများကြား ဒီမိုကရေစီ၊ဖက်ဒရယ်ဝါဒတို့ အပေါ်တွင်နားလည်မှု အားနည်း နေမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ စစ်တမ်းတွေ့ရှိချက် -- တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာ ဖွံဖြိုးရေးနှင့် သုတေသနအသင်း (CDES)မှ နိုင်ငံရေးနှင့်အစိုးရအပေါ် လူထု၏အမြင်များနှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနပြုမှုအား မဇ္ဈိမသတင်းဌာမှဖော်ပြချက်။
ဆန္ဒမဲ ပယ်ဖျက်ခြင်းများသည် လူနည်းစု မဲဆန္ဒရှင်များ၏ ဒေါသမီးကို တောက်လောင် စေပါသည်။ -- မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးအင်စတီကျု (MIPS)၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာမင်းဇော်ဦး၏ တင်ပြချက်အား Al Jazeera သတင်းဌာမှ ကိုးကားဖော်ပြချက်။
မည်ကဲ့သို့သော webinarsများ သင်တွေ့နိုင်သလဲ?
Myanmar Speaker Series အနေဖြင့် ပြီးခဲ့သည့် လများအတွင်းတွင် Virtual Event ဆယ်လေးခုကျော် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး တက်ရောက်သူ ရာပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ ဆွေးနွေးမှုများတွင် အမျိုးသမီးများ၏နိုင်ငံရေးပါ၀င်မှု၊ ပြည်နယ်အဆင့် လွှတ်တော်များကို ထောက်ပံ့ခြင်း၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်းနှင့် လုံခြုံရေး၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ပညာရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုစသည့် အကြောင်းအရာများနှင့် ပက်သက်သည့် သူတေသနပြုချက်များ ပါဝင်သည်။ သင့်အနေဖြင့် ယခု Link မှ တဆင့်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ .
မကြာမှီရောက်ရှိလာတော့မည့် စိတ်ဝင်စားစရာအစီစဉ်များ …
လာမည့် အပတ် ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက် ၂၀၂၀ တွင် Boosting Investment in Social Science Research in Myanmar Webinar အစီအစဉ် ကို အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့်ပြုလုပ်သွားပါမည်။ စာရင်းပေးသွင်းရန်…
၂၅ ရက် ဇန်နဝါရီလ ၂၀၂၁ တွင် K4DM မှကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်ကြမည့် Think Tank သင်တန်းကျောင်း အစီအစဉ် ၂၀၂၁။ စာရင်းပေးသွင်းခြင်း ကာလပြီးဆုံးသွားပါပြီ၊ ပိုမိုသိရှိလို့ပါက…
၅-၇ ရက် မတ်လ ၂၀၂၁ တွင် တတိယအကြိမ်မြောက် မြန်မာ့အရေးလေ့လာမှု နိုင်ငံတကာ ဆွေးနွေးပွဲရှိပါသည်။ စာရင်းပေးသွင်းရန်…
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသုတေသနဌာန (IDRC) နှင့် Global Affairs Canada တို့သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် Knowledge for Democracy Myanmar Initiative ကိုပူးပေါင်း၍ စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ၅ နှစ်တာအစီအစဉ်သည် အားလုံးပါ၀င်နိုင်မှု၊ ကျား၊ မတန်းတူညီမျှမှု၊ မတူကွဲပြားမှုကိုလေးစားခြင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏နေရာဒေသအားလုံး တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် လုပ်ဆောင်ရာတွင် မျိုးဆက်သစ်များကို ပျိုးထောင်ပေးရန် ရည်ရွယ်သည်။ ဤအစီအစဉ်သည်ဒေသခံ သုတေသီများနှင့် တတ်သိပညာရှင် (Think Tank) အဖွဲ့များအတွက် အထောက်အပံ့နှင့် သင်တန်းများပေးနေပါသည်။
K4DM မှထုတ်ဝေလျှက်ရှိသော သတင်းလွှာနှင့် အခြားသော သတင်းအချက်အလက်များ ကို Email မှတဆင့်ရယူရန် ဤနေရာတွင် နှိပ်ပါ…